Iikhathalogu ezingama-49 onokuzifumana ngeposi - Ikrisimesi Izipho
Enye Indlela Fuel
Iikhathalogu ezingama-49 onokuzifumana ngeposi
Iikhathalogu zeKrisimesi ziyintandokazi engathandekiyo ehlala iyindlela elungileyo yokwenza uluhlu lweminqweno yeKrisimesi kunye nokuthenga izipho kunye nokuhonjiswa ngeholide. Nangona ukuthengwa kwi-Intanethi kuye kwathandwa kakhulu, kukho inani elimangalisayo labathengisi abasanikezela iikhathalogu zeKrisimesi eziprintiweyo onokuzithumela ekhayeni lakho.
Iikhathalogu ezikhethekileyo zeKrisimesi
Ukuba ujonge iikhathalogu ezijolise kugqaliso lweKrisimesi, kukho iindlela ezininzi, ezivela kwezi zijolise ngokuthe ngqo kwizihombiso kwabo banikezela ngazo zonke iintlobo zezinto zeKrisimesi, ukusuka kwizinto zokuhombisa kunye neestokhwe ukuya kwizibane kunye nokuhonjiswa kweKrisimesi. Ezi khathalogu zezabathengisi abagxile kwizinto zeKrisimesi nokuba leliphi ixesha lonyaka
Izipho ezili-12 zeKrisimesi eziPhambili zaMadoda kuBomi baKho
Izipho zeKrisimesi ezi-12 zokucinga kunye nezothando zaMadoda
10 Istokhwe esiKhethekileyo seKrisimesi esiKhuthazayo seHolide yakho
I-Bronner yeVenkile enkulu yeKrisimesi yeHlabathi
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeBronner ineetoni zezinto zeKrisimesi onokukhetha kuzo. Iqukethe izinto ezinjengezinto ezahlukeneyo zokuhombisa ezenziwe ngabantu kunye nezitokhwe, izihombiso ezinemixholo, iwindow yeKrisimesi kunye nokuhonjiswa kwetafile, imiboniso yokuzalwa, imihombiso yeKrisimesi yangaphakathi / yangaphandle, kunye nemifanekiso yeKrisimesi. Banikezela ikhathalogu yabo yasimahla. Ungayicela nge-imeyile ubhalise, uprinte ifom yoku-odola, okanye umnxeba.
Izinto ezikhethekileyo zikaEvangeline
Izinto ezikhethekileyo zikaEvangeline ineempawu ezintle zekrisimesi kunye nezibane zeKrisimesi. Izinketho zibandakanya iinkwenkwezi ezikhanyisiweyo, imithi yeKrisimesi, iingelosi, izigcawu zonqulo, iintambo, i-reindeer kunye nokunye. Banikezela ngeebhendi ezinemixholo yeKrisimesi, ukuhonjiswa ngaphandle kwamakhaya kunye namashishini, izithsaba, ukuvelisa imithi yeKrisimesi, izibane zoopopayi, kunye nokuhonjiswa kwangaphandle kunye nokukhanya kweeyadi. Banee-arches zeeyadi kunye neeseti zokuzalwa kobungakanani bobomi! Unoku-odola ikhathalogu yokuprinta ngokugcwalisa ifom kwiwebhusayithi yabo.
IKrisimesi yeHlabathi eNdala
IKrisimesi yeHlabathi eNdala igxile kwiglasi yokuhombisa yegilasi entle. Ezi ziyafumaneka kumakhulu emixholo eyahlukeneyo kunye nezitayile, ukuze ufumane ubukhazikhazi obugqibeleleyo bendlu yakho nabo bonke abakuluhlu lwakho. Unokucela ikhathalogu kwezinye iivenkile zeKrisimesi, ezinje IKrisimesi ePrescott nge-imeyile okanye ngokugcwalisa ifom ekwi-intanethi. Nangona kunjalo, qaphela ukuba le khathalogu ithandwayo ihlala ikhawuleza kakhulu, Iyathandwa kangangokuba iphuma ngoMatshi ngaphambi kweKrisimesi! Ndwendwela Kwiwebhusayithi yeKrisimesi yeHlabathi eNdala Ukujonga izihombiso kwi-Intanethi okanye ukufumana uguqulelo olunokuprintwa lwezihombiso zabaqokeleli babo.
Ikhathalogu yeKrisimesi yaseVermont
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeKrisimesi yaseVermont Iikhalenda zeAdvent kunye nezinye izinto zeAdvent, iiseti zokuzalwa, amakhadi, iiphazili, izithsaba, iilekese zeholide, iiseti zokuzalwa, kunye nokunye. Baqinisekisa iimveliso zabo, kwaye ungabuyisa nayiphi na into ngaphandle kweekhalenda zeelekese kunye neemveliso zesiko kwiintsuku ezingama-30. Unokucela ikhalenda ngefom kwiwebhusayithi yabo.
Ibhalsam isebenza kwimithi engengowamvelo, ihonjiso lweKrisimesi, igarland nezidanga. Ukongeza, banokukhetha okuhle kokuhonjiswa kweKrisimesi njengeiglobhu zekhephu, amanani eKrisimesi aqokelelweyo, umhombiso womthi kunye nezibane, imihombiso yeeyadi, kunye namakhandlela. Inkampani ijolise kumgangatho ophezulu, ukuhonjiswa okuqinisekileyo okwenyani ukwenza ikhaya lakho lilungele iiholide. Gcwalisa i Ifom yesicelo seKhathalogu yeBhalsam Hill kwiwebhusayithi yabo ukufumana ngokuzenzekelayo ikhathalogu yabo yeKrisimesi ngeposi ekuqaleni kwexesha leholide.
Iikhathalogu zeKrisimesi ezibuyisela kwizibonelelo
Ukuba ujonge indlela yokunika izipho okanye ukubhiyozela ixesha ngendlela ebuyisayo, ezi khathalogu zothando zeKrisimesi zinokuba yile nto uyifunayo.
I-Servv ngumthengisi okhethekileyo ojolise kurhwebo olululo lwezinto zekhaya, ubucwebe, izipho. Ikhathalogu yohlobo lweholide ibandakanya isikhokelo esifanelekileyo sesipho. Ikwabonisa imihombiso, iiseti zokuzalwa, amakhandlela, ukuhonjiswa kwetafile, ukuphoswa kwemiqamelo, ukuhonjiswa kodonga ngeholide, nokunye okuninzi. Gcwalisa i Isicelo sekhathalogu yeserv ukuba ikhathalogu ithunyelwe ngephepha ekhayeni lakho simahla.
Incwadi yeZipho zeholide yaseSt
Cela iSt. Jude Holiday Gift Book online izipho ezenza umahluko. Fumana izinto ezinje ngeeepijama zeholide, iimpahla zabantwana, iithoyi kunye neplush, izihombiso eziphefumlelwe bubugcisa besigulana, ukuhonjiswa kwekhaya leKrisimesi, iiggs, ukuphosa, kunye nezinto zasekhitshini phakathi kwabanye.
INgxowa-mali yeHlabathi yeZilwanyana
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeWorld Wildlife Fund unezipho zeholide ezixhasa umsebenzi wabo wokunceda izilwanyana ezisemngciphekweni kunye nokuxhasa iinzame zolondolozo lwehlabathi. Ikhathalogu inezinto ezininzi zokwamkelwa okomfuziselo kweentlobo ezahlukeneyo. Xa unika enye yezilwanyana, uya kufumana i-plush ekhangayo emele yona (ubukhulu buhluka ngokusekelwe kumanqanaba esipho). Cela ikhathalogu kwi-intanethi ngokugcwalisa ifom yewebhu.
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeBhasari yamaSamariya Iquka izipho ezixhasa umsebenzi womSamariya wokunceda abantu kwihlabathi liphela ngegama likaYesu Krestu. Umbutho wamaKristu ongekho mthethweni kunye nekhathalogu yabo yeholide ibandakanya izipho onokuthi unikele ngazo, ezinje ngemfuyo okanye ukulungiswa esibhedlele, ezinceda abantu kwihlabathi liphela. Ukuba ujonge isipho somntu ekunzima ukumthengela umntu, cinga ngokunikela ngesinye sezi zipho ezingalibalekiyo egameni lakhe.
Iikhathalogu zekrisimesi zezinto zasekhaya kunye nezipho
Jika kwiikhathalogu ufumane izinto ezintle ukuze ulungiselele ikhaya lakho iiholide kunye nokukunika izimvo zezipho ezinkulu zeKrisimesi.
Ikreyiti kunye noMgqomo
ICrate kunye noMgqomo unika iikhathalogu zanyanga zonke, kwaye ikhathalogu yabo yeholide inezinto ezininzi ezinje ngomthi kunye nokuhonjiswa kweemantel, izinto zasekhitshini leeholide, izinto zeholide zokuzonwabisa kunye nokubhaka, kunye nemibono emininzi yezipho ezinkulu zeKrisimesi zabantwana kunye nabantu abadala. Gcwalisa isicelo sekhathalogu kunye noMgqomo ukuze uqale ukufumana iikhathalogu.
Incwadi kaNeiman Marcus yeKrisimesi
Inkqubo ye- Incwadi kaNeiman Marcus yeKrisimesi Ixabisa i-15 yeedola, kodwa le khathalogu inezinto ezininzi zasekhaya zeholide kunye nezipho ezinomdla zeKrisimesi, ukusuka kwizitokhwe ezintle zokugcina izinto ziye kwizipho ezizodwa kunye nezoyilo. Fumana yonke into ukusuka kwindawo yesinyithi yeholide ukuya kwi-reindeer enkulu. Baqala ukuthumela ikhathalogu ekwindla.
yintoni ukuhambelana kubudlelwane
Jonga ifayile Ikhathalogu yeeholide zorhwebo ze-LTK Izipho zasekhaya, ukuhombisa, iithoyi, izinto zasekhaya, ibhedi kunye nezipho zokuhlamba, iimpahla zasekhitshini, nokunye okuninzi. Ikhathalogu ikwaqhayisa ngezinto zangaphakathi nangaphandle zokuhombisa iiholide kunye namakhulu ezinto ezithile zentengiso ngamaxabiso asezantsi. Inkampani ijolise ekunikezeleni ngezinto ezisemgangathweni ngamaxabiso afikelelekayo, ke yinto elungileyo ukuba unoluhlu olude lwezinto oza kuzithenga.
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeKrisimesi evela kwiLakeide Collection Amagqabantshintshi wezipho, ukuhonjiswa kwekhaya, iimveliso zangaphandle, izipho zezilwanyana zasekhaya, ukunciphisa umthi. Zijolise kumgangatho kunye nexabiso kwaye zinikezela nangezinto ezizezakho. Bathumela iikhathalogu zenyanga, ke bhalisa ngalo naliphi na ixesha kwaye uya kuba kuludwe lweposi lohlelo lweholide.
Cela iiMiles Kimball iikhathalogu zokuthenga izinto ezinje ngamakhadi, ukuhonjiswa kwasekhaya, izinto zeholide zonyaka, iimpahla zasekhitshini, iimveliso zasekhaya, izinto zokuzonwabisa, iincwadi kunye nezipho zabantwana kunye nabantu abadala. Banokukhetha izinto ezintathu kwikhathalogu-fumana enye okanye zontathu. Iikhathalogu eziqhelekileyo ziya kuba nohlobo lweholide kunye nezinto ezahlukeneyo ukuze ukhangele, okanye ucele ikhathalogu yeeKhadi zeKrisimesi yeeMiles okanye ikhathalogu yeCandy Shoppe. IMiles Kimball yasekwa ngo-1935, ke yinkampani eye yazibonakalisa kubathengi.
UCarol Wright Izipho
Inkqubo ye- UCarol Wright Izipho ikhathalogu yeeholide kubandakanya izinto zendlu, iimpahla, ezempilo kunye neemveliso zobuhle, njengoko zibonwe kwizipho zeTV, kunye nezinto zangaphandle kunye nezinto ezizenzekelayo. Inkampani yasekwa ngonyaka we-1972 kwaye ibiyinkokheli yokuthenga ikhathalogu (nangona ngoku ungathengisa kwi-Intanethi). Iphuma ngokuwa ukuze ube nexesha elininzi lokuthenga.
Izipho zikaHarriet Carter
Izipho zikaHarriet Carter ikwangumthombo omkhulu wezipho, njengoko kubonwe kumabonwakude, kunye nokuhonjiswa kweKrisimesi / kweeholide. Gcwalisa i Izipho zekhathalogu zikaHarriet Carter zicela kwi-Intanethi (ungathatha isicatshulwa kwikhathalogu yePDF ukuba awukwazi ukulinda ukuyifumana ngeposi) ukufumana ikopi yakho yeholide. UHarriet Carter ekuqaleni wayeyishishini loku-odola ngeposi elasekwa ngo-1958, kwaye usabonelela ngokuthenga ikhathalogu kunye nokuthenga kwi-Intanethi.
Ukuphela komhlaba kuyaziwa ngesinxibo saso somgangatho, izinto zokwazisa zasekhaya, nokunye.Bathumela iikhathalogu rhoqo, ke gqibezela Ifom yesicelo sokuphela komhlaba ukuba kuluhlu lweekhathalogu zeKrisimesi. Unokukhetha kwikhathalogu eqhelekileyo, kunye nobungakanani, amadoda, abantwana, ikhaya, isikolo, okanye iimpahla zeshishini. Kuxhomekeka ekubeni ubhalise phi, ufumana izinto ezinje ngeePijama zosapho lweKrisimesi, iingubo zokuphola ezimnandi, iidyasi ezifudumeleyo zasebusika kunye neebhutsi, kunye nezinto zezilwanyana zasekhaya.
I-MIdnight Velvet ijolise kwimfashini kunye nokuhombisa, ukubonelela ngezinto ezahlukeneyo zasekhaya, iimpahla zokunxiba, nokunye okuninzi. Inkqubo ye- Ubusuku beVelvet ikhathalogu yekhathalogu kubandakanya isikhokelo sesipho kunye nezinto ezifana nelokhwe ezikhethekileyo kunye neesuti. Bhalisa kwi-Intanethi ukufumana ikhathalogu yokuprinta.
Iikhathalogu zelizwe zeKrisimesi
Ingaba uhlala ubomi kweli lizwe, unefama, indlu yokuhlala, okanye ungomnye wabantu abaninzi abathanda indlela yokuhlobisa ilizwe kunye nezipho, unokukhetha ezininzi kwiikhathalogu zelizwe zeKrisimesi.
I-Piper Classics yindawo edumileyo yokuhombisa ilizwe, ke ngokwendalo uya kuyifumana ikhathalogu yeKrisimesi ezaliswe ziimpahla zasekhaya kunye nokuhonjiswa kwamaxesha ngamaxesha kwizitayile zelizwe, ezinje ngamakhethini, iquilts, iiragi, ikhitshi kunye nokuhlamba, izinto zetheyibhile yeholide, iikhalenda, amakhadi, kunye Isithsaba segolide. Unga cela ikhathalogu yokuprinta yePiper Classic kwi-intanethi , kwaye bathumela iiflaya zamaxesha ngamaxesha. Banikezela ikhathalogu enye esemgangathweni kunye nekhathalogu enye yeKrisimesi ngonyaka.
Ivenkile yakwaLehman igxile kwiindawo ezikude, eziko kunye nemveliso yasekhaya. Ungayifumana Ikhathalogu yokuprinta kaLehman simahla ukuba uzimisele ukuthoba ubunzima kwiiveki ezisibhozo ukuya kwezili-10, okanye uhlawule ukuhambisa ngenqanawa okungama-2 ukuyifumana phakathi kweentsuku ezisixhenxe ukuya kwezili-10 zeshishini. Unokucela ikhathalogu ngefom yoqhakamshelwano okanye ngomnxeba. Bhrawuza izinto kwiiVenkile zeKrisimesi ezifana nezinto zokupheka, iithoyi, izitokhwe, izipho zokutya, kunye nezipho kwabo bathanda ngaphandle.
Ivenkile yeVermont yelizwe
Ivenkile yaseVermont yelizwe inikezela ngemveliso esebenzayo kunye neyodwa kwilizwe elineminyaka engaphezu kwamashumi asixhenxe. Ivenkile yabo yeKrisimesi ibandakanya iitafile zeholide, iimpahla zokulala zeholide, kunye nezambatho, iziliphu, izinto zokulala, iimpahla zangaphandle, ibhafu yeerustic kunye nemveliso yomzimba, amakhandlela kunye nezipho zokutya zelizwe. Cela i Ikhathalogu yeVermont yeKrisimesi onlin e (ikhathalogu yabo yekhethini yokuprinta iyafumaneka ukuze icelwe.
Umnyango welizwe uthengisa indlu yasefama kunye nezinto zekhaya, ifenitshala kunye nokuhombisa. Inkqubo ye- Ikhathalogu yeholide yomnyango welizwe inelizwe elihonjiswe ngokwamaxesha onyaka, ukulala ngeholide, ukuphosa imiqamelo, izithsaba, ukukhonza izitya, izihombiso, nezinye izinto ezininzi zekrisimesi zelizwe. Gcwalisa ifom yesicelo sekhathalogu kwiwebhusayithi yabo.
Ukulima kunye neZiko
Indawo yokuthengisa yasekuqaleni kunye nendawo yokuthengisa eVirginia ikhule ngaphezulu kweendawo ezingama-25 kunye nevenkile eku-intanethi. Ungayifumana Ikhathalogu yokuprinta ikhuba kunye neentliziyo zokubhalela iiholide ngokubeka ulwazi lwakho kwiphepha lesicelo. Ivenkile yabo yeeholide ibandakanya izipho zekhaya, iyadi kunye nezinto zegadi, imithi yokufakelwa, ukuphosa imithwalo kunye neerug, izihombiso kunye nokuhonjiswa kwe-rustic ngaphakathi nangaphandle.
Iikhathalogu zeeNoveli ezintsha zeKrisimesi, ubugcisa kunye nezixhobo zePati
Fumana iikhathalogu ezinikezela ngezinto ezinqabileyo ezinqabileyo, ubugcisa, ukuthanda izinto, ukubonelelwa kweqela kunye nokunye ukubhiyozela iKrisimesi.
Ukurhweba kwaseMpuma kuyaziwa ngobugcisa kunye nezinto ezintsha. Inkqubo ye- Izinketho kwikhathalogu yeholide yokuThengisa eMpuma zibandakanya ikhathalogu yabo yesiqhelo yeKrisimesi, ikhathalogu yobugcisa beholide, ikhathalogu yeqela leeholide, kunye nekhathalogu yeholide ejolise kwinkolo. Uyakufumana izinto zamaqela, ubugcisa, ukuhombisa, ukugcina impahla, kunye nezinye iimveliso ezonwabisayo ukubhiyozela ixesha kunye. Cofa nje kwiikhathalogu ofuna ukuzifumana ngeposi.
Ukuba ubugcisa okanye isitampu okanye unomntu kuluhlu lwakho lwesipho ngubani, uya kufuna Cela ikhathalogu yeholide yeStampin 'Up . Izele izitampu, iikiti kunye nemibono yezipho ezigqibeleleyo kubathandi bobugcisa okanye inokukunceda uphawule amakhadi kunye nokuhombisa ngeeholide.
I-Express Express yindawo yokubonelela ngeqela elikwi-intanethi kunye nevenkile enezinto ezintsha, kodwa zikwabonelela ngekhathalogu yokuprinta nayo. Cela ikhathalogu yoLonwabo Ukuthenga izinto ezinje ngeelekese zeholide, ubugcisa, itheyibhile yeqela, iingxowa zezipho, isitokhwe sempahla, imihombiso kunye nezinye izimanga zeholide. Fumana izinto zonyaka eziza kukunceda ulahle iqela elifanelekileyo leholide okanye uqokelele.
Iikhathalogu zeKrisimesi zeZipho eziDliwayo
Izipho ezidliwayo zilungele wonke umntu kuluhlu lwakho lweKrisimesi.
I-Swiss Colon luphawu lokutya olumnandi olunika iintlobo ngeentlobo zezipho zeKrisimesi zokutya ezivela kwiikeyiki kunye needyuli ukuya kumantongomane kunye nenyama yegourmet kunye netshizi. Banikezela ngokutya okungenashukela kunye nokutya okungenagluten. Bebeshishini ukusukela ngo-1926, ke unokuziva uzithembile xa ubuza Ikhathalogu yaseSwitzerland Colony ukwenza iiodolo zesipho seKrisimesi ukusuka.
Ukuba unomthandi we-nut kwiluhlu lwakho lweKrisimesi, unokufuna ukucela IPecans kwikhathalogu yeeholide yePeachtree . Benza izipho ze-pecan, ezinje ngee pecans ezintle, ii-pecans ezigcadiweyo, i-pecan candies, imixube ye-nut, kunye neetawuli zezipho, iitreyi kunye neebhasikithi.
Ivenkile yee Peanut
Enye inketho kubantu abathanda amantongomane yiVenkile yePeanut. Inkqubo ye- Ivenkile yamandongomane yeeholide zekhathalogu izipho zamandongomane eeholide njengamandongomane anetyuwa, amandongomane athandiweyo, amandongomane anamava, amandongomane etshokholethi kunye nabanye. Iitoti zeholide, iinqaba, iibhasikiti kunye neeseti ziyafumaneka.
Ngubani ongenazinyo limnandi kwiiholide? Inkqubo ye- Ikhathalogu yeKrisimesi kaGardner kubandakanya i-melt-aways, i-chocolate assortment, i-bark chocolate, i-cherries ehlanganiswe nge-chocolate, i-candies kunye ne-caramels phakathi kwezinye izinto. Cela ikhathalogu kwi-intanethi okanye ngefowuni.
Ikhathalogu yeeholide kaSarris ifaka i-chocolate assortment, izipho ze-nut, itshokholethi egutyungelwe i-pretzels, iicookies, iilekese ezisongelwe, iilekese, kunye neetshokholethi ezimile kakuhle ezibukeka njengeSantas okanye imithi yeKrisimesi. I-Thave ineentlobo ezingenashukela, nazo. Cela ikhathalogu ngefowuni okanye kwiwebhusayithi yabo.
Loluphi uhlobo lokudibanisa inja yam
Ukuba unomdla wokukhangela kwizipho zokutya gourmet, jonga ukucela ikhathalogu yeeHickory Farms ngeli xesha lonyaka. Kukho into kuwo wonke umntu, ukusuka kwi-gourmets steaks, inyama, kunye noshizi ukuya ekuphatheni okumnandi kunye neelekese. Iwayini, iziqhamo, kunye nezinye iingobozi zezipho zezinye iindlela. Gcwalisa ifom yabo ekwi-intanethi ukongezwa kuludwe lweposi.
Ukutya okudala kweMill kwahlukile kuba kugxile kwizipho zokutya ezivela kuMmandla weNtaba oMkhulu oTshayayo. Cela ikhathalogu yokutya okudala g ukukhangela izinto ezinje ngeekrisimesi zeKrisimesi, iisiraphu, imixube yokubhaka, isonka, iijam kunye neepie. Yenza isicelo kwi-intanethi ngefom yabo okanye ngomnxeba.
Iikhathalogu zeKrisimesi zokudlala
Iithoyi zeKrisimesi ziyinto ephambili! Bonke abantwana bayathanda ukuvuka kusasa ngeKrisimesi ukuvula isipho esonwabisayo esivela kuSanta (okanye umama okanye utata). Ezi khathalogu zinokukunceda ugqibezele ukuthenga kwakho ngeeholide,
Inethiwekhi yokudlala Ikhathalogu yokudlala yeholide ungacela ukuba ishicilelwe. Uya kufumana izinto ezimnandi ezinje ngeminqwazi yeKrisimesi, izitokhwe, ubucwebe obutsha, iikrisimesi zeKrisimesi, ii-clip-ons zemidlalo yokudlala, impempe, izipho zokudlala ezincinci kunye nokunye. Fumana izimvo ngobuninzi bezinto zokugcina izinto kubo bonke abantwana abakuluhlu lwakho.
Ikhathalogu yeHolide yeLego
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeLego Preholiday unemithwalo yeembono zokudlala ezintle kubathandi be-lego kunye neebhola ezintsha ngokufanayo. Kukho iitoni zokukhetha amakhwenkwe, amantombazana, kunye nabalandeli be-lego abadala. Gcwalisa ifom (kuyakufuneka unikwe ii-cookies) kwaye ufumane ikhathalogu emnandi.
IiDola zamantombazana aseMelika sisipho esinqwenelekayo seKrisimesi ngabantwana kulo lonke ilizwe. Fumana i Ikhathalogu yaseMelika yamantombazana kwaye ukhangele oonodoli, izixhobo, kunye neencwadi zomntwana wakho omncinci ukuze azalisekise amaphupha akhe eKrisimesi,
Amathoyizi eBongo eBat
Izinto zokudlala zeFat Brain zibonisa izinto zokuzonwabisa ezinomdla kunye nemfundo eziya kuthi zincede abantwana bonwabe, bafunde kwaye babonakalise ubuchule babo. Cela i Ikhathalogu yeeThoyizi zeBongo ukufumana izinto ezinje ngokudlala izindlu zemithi, izinto zokudlala ezinoluvo, izinto zokudlala zabantwana, iinqaba, iinqwelo zokufunda, iitampolines ezincinci, iipuzzle, nokunye okuninzi.
Ukusonga kunye namakhadi
Ukusonga iphepha kunye namakhadi kubalulekile kwixesha leholide. Fumana ezi khathalogu ukubeka izinto ozigqibileyo kwizipho zakho.
I-Nashville Wraps ine-assortment yokuhanjiswa kweholide kunye nezinto zokupakisha. Gcwalisa i ifomu yesicelo sekhathalogu ukuyifumana simahla ngeposi. Iphepha lokusonga eligqibeleleyo, iingxowa, iribhoni, iithegi, iibhokisi, izicwili kunye nokunye okuninzi kuprintwe kunye neepateni, ukusuka kwizimbo zesiko leeholide ukuya kwimixholo yokuzingela kunye neendlela zokuzalwa.
Ikhathalogu yeholide yangoku kubandakanya amakhadi okubulisa, izinto zokubhala, ukuhonjiswa kweKrisimesi, izinto ezigcinwayo, abaphathi kunye nezinye iindlela zekrisimesi. Unokufumana iileta ezivela kwi-Santa kunye neeseti zesitikha.
Izipho ezenzelwe wena zinoluvo olukhethekileyo olunokwenza nabani na ukuba azive ukuba ubakhathalele kangakanani.
Ngaba ndingajola kwisikolo samabanga aphakamileyo
Ukhetho lwezipho, ikhaya kunye nokuhonjiswa kweholide ngezinto ezininzi ezizezakho nguLillian Vernon. Gcwalisa i ikhathalogu yesicelo sekhathalogu kwiLillian Vernon websit ukuyifumana ngeposi simahla. Fumana izinto ezinje ngestokhwe esenzelwe wena kunye neKrisimesi kunye nezinto ezininzi ezenzelwe umntu ekhaya ezinje ngeebhodi zokusika, ii-coasters, imiqondiso, iimbaleki zeetafile kunye nezipho zeefoto. Banokhetho olufanelekileyo lwezinto ezingenziwanga ngokokuhombisa iKrisimesi, ikhaya, kunye nokuphana izipho njengezinto zokudlala kunye nekhitshi.
Ukuba ujonge iintlobo zezipho ezenzelwe wena, umhombiso weKrisimesi, iimveliso zasekhaya, kunye nezinto zokuhombisa, fumana ikopi yefayile ye- Ikhathalogu yoDalo lomntu . Okukhethwa kukho kubandakanya izinto eziluncedo, ezinesitayile ezinjengeemugs, iiseti zokwenza izinto, iitreyi, abanini beziselo, isitulo samanyathelo, kunye nezakhelo zemifanekiso kunye nezinto ezithile zeKrisimesi.
I-Nashville Wraps ine-assortment yokuhanjiswa kweholide kunye nezinto zokupakisha. Gcwalisa i ifomu yesicelo sekhathalogu ukuyifumana simahla ngeposi. Iphepha lokusonga eligqibeleleyo, iingxowa, iribhoni, iithegi, iibhokisi, izicwili kunye nokunye okuninzi kwimizobo eprintwayo kunye nepattersn, ukusuka kwizimbo zesiko leeholide ukuya kwimixholo yokuzingela kunye neendlela zokuzalwa.
Ikhathalogu yeholide yangoku Bandakanya amakhadi okubulisa, okumileyo, ukuhonjiswa kweKrisimesi, izinto ezigcinwayo, abaphathi kunye nezinye izinto zeKrisimesi. Unokufumana iileta ezivela kwi-Santa kunye neeseti zesitikha.
Izipho ezenzelwe wena yindlela ekhethekileyo yokubonisa nabani na ukuba umkhathalele kangakanani.
Inketho yezipho, ikhaya kunye nokuhonjiswa kweeholide ngezinto ezininzi ezizezakho nguLillian Vernon. Gcwalisa i ikhathalogu yesicelo sekhathalogu kwiLillan Vernon websit ukuyifumana ngeposi simahla. Fumana izinto ezinje ngestokhwe esenzelwe wena kunye neKrisimesi kunye nezinto ezininzi ezenzelwe umntu ekhaya ezinje ngeebhodi zokusika, ii-coasters, imiqondiso, iimbaleki zeetafile kunye nezipho zeefoto. Banokhetho olufanelekileyo lwezinto ezingenziwanga zokuhombisa iKrisimesi, ikhaya, kunye nezipho ezinje ngeethoyi kunye nekhitshi.
Ukuba ujonge izipho ezahlukeneyo ezenzelwe umntu, umhombiso weKrisimesi, iimveliso zasekhaya, kunye nezinto zokuhombisa, fumana ikopi Ikhathalogu yoDalo lomntu . Okukhethwa kukho kubandakanya izinto eziluncedo, ezinesitayile ezifana neekomityi, iitagi zeminyango, iitreyi, abanini beziselo, isitulo samanyathelo, kunye neefreyimu zemifanekiso kunye nezinto ezithile zeKrisimesi.
Ngamanye amaxesha udinga into engaqhelekanga ngesipho, nokuba ujonge into engalibalekiyo okanye ufuna isipho kumntu onayo yonke into.
Izinto ezingaqhelekanga ziyaziwa ngezinto ezizodwa zezipho. Ngenisa iGoo yakho engaqhelekanga ds isicelo sekhathalogu , kwaye kwiiveki ezimbalwa ungazithengela izinto ezinje ngomsebenzi wobugcisa owahlukileyo kunye nezinto zokuhombisa zobugcisa, yenza iikiti ezineshushu-isosi, iitreyi ezikhethekileyo zoqalo, iiglasi zewayini zomculo, inhlama yonyango, iphinda isebenzise ukukhanya kwelanga kweglasi, ubucwebe obenziwe ngezandla, okanye imidlalo engaqhelekanga.
Inkqubo ye- Ikhathalogu yeZipho zeBrecks ifaka iintyatyambo, izityalo, imithi ehonjisiweyo, izipho, ukutya nokunye. Ukuba unomntu kuluhlu lwakho othanda izityalo neentyatyambo, zinokuninzi onokukhetha kuzo, kubandakanya izityalo ezahlukeneyo zeAmaryllis, izityalo zendlu, imithi emincinci ehonjisiweyo, izipho zokulima, uhlaza, kunye neeklabhu ezizodwa njengeBhalbhu yeNyanga.
Iintetho zaseMelika zaseMelika
Iintetho zaseMelika zaseMelika zithengisa izinto ezenzelwe ama-Afrika aseMelika. Babo ikhathalogu yeholide unokucelwa kwi-intanethi okanye ngefowuni kunye neempawu zeKrisimesi kunye nezinto zeholide
Ukuba ujonge izipho ezintsha, cela Isikhokelo sesipho seholide esibonisa umfanekiso . Fumana izipho ezinje ngee-bobbleheads ezenzelwe wena, iziketi zemithi ezinemidlalo, iimveliso zokhathalelo lomntu ezizodwa, izipho zobugcisa obuphezulu kunye nezipho zasekhitshini, intuthuzelo ekhaya kunye nokhathalelo, imidlalo ye-elektroniki epholileyo yabantwana, kunye nokuhonjiswa kwasekhaya okukhethekileyo
Iingcebiso zokuthenga kwikhathalogu yeKrisimesi yale mihla
Ukwenza ukhetho lwakho kwikhathalogu kunye nokuthenga iimveliso kwi-Intanethi kubonelela ngokudibanisa okudala kokutsha kunye nokwangoku. Ngelixa kukho into ekhethekileyo malunga nokubaleka kwiphepha lekhathalogu yokuprinta, unokufumana ngokulula iimveliso onomdla kuzo ngokukhangela kwikhathalogu. Xa undwendwela iwebhusayithi ukuyokuthenga, i-odolo yakho iqhutywa ngokukhawuleza, ufumana ulwazi ngomzuzu ngokufumaneka kobungakanani kunye nemibala oyifunayo, kwaye unokulungela ukuthengisa kunye nezaphulelo.
Indlela elula yokufumana ikhathalogu eprintiweyo kukutyelela iwebhusayithi yomthengisi ongathanda ukuba ikhathalogu igcwalise iifom zezicelo zabo zekhathalogu. Ukuthengwa kwe-Intanethi okanye i-imeyile evela kwinkampani enikezela ikhathalogu iya kuhlala ikuluhlu lweposi ngokunjalo. Unokwazi ukufumana ikhathalogu kwiivenkile ezithengisa okanye ubhalisele ukufumana enye apho. Ukujonga ikhathalogu yesicelo sokucoca indlu njenge Iikhathalogu.com lolunye ukhetho.
Ezinye iingcebiso zeKhathalogu
Njengakudala, iikhathalogu zilungile ekwenzeni uluhlu lweminqweno. Maka amaphepha kunye nezinto ozithandayo, kwaye uwashiye ejikeleze indlu ukuze ungabonakalisi kusapho lwakho.
Ukuba unika umntu aikhadi lesipho, zibandakanya ikhathalogu, ukuze babenako ukujonga kwangoko izinto abanokuzithenga.
Nokuba ukhetha ukukhangela kwikhathalogu, uninzi lweendawo zikwabonelela ngokuthengwa kwi-Intanethi, ezinokukhawuleza kwaye kube lula.
Ukujonga kwiikhathalogu zeKrisimesi kulisiko elide nelonwabisayo. Abathengisi abaninzi bayaqhubeka ukubanikeza nakweli xesha leendlela zedijithali kunye nokuthenga kwi-Intanethi. Konwabele ukonwabisa ukutyibilika kwikhathalogu eprintiweyo kwaye ufumane zonke izinto zeholide ozifunayo.
Yonke Into Blogging Malunga Cocktails Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu Uncwadi Ne Poetry Ukutya
Iimpahla Ezenziwe Ekhaya
Malunga Ukubhala Ukubhala
sesiphi esona sizathu sokufa kulutsha?
Inyaniso engcolileyo okanye imibuzo yokufikisa kulutsha
indlela i-grinch ebambe ngayo iskripthi sencwadi yekrisimesi
indlela yokufumana kwakhona imiyalezo emidala
apho ungabelana ngesondo ulutsha
yeyiphi eyona gel ingcono okanye iinzipho ze-acrylic